Casharrada casharrada Android talaabo talaabo ah: uga faa'iideyso mobiladaada | Androidsis (Bogga 19)
Sida loo rakibo Motorola Smart Screen wixii Android 4.1 ama ka sareeya ah
Maanta waxaan sharxeynaa sida loogu rakibo Motorola Smart Screen shaqeynteeda meel kasta oo Android ah iyada oo aan loo baahnayn Root ama wax la mid ah.
Sida loo muraayad shaashadda Android kombiyuutarka shaqsiga ah
Maanta waxaan ku tusineynaa xal weyn oo aad kuhesho muraayadda shaashadda Android kombiyuutar shaqsiyeed
3 barnaamij oo lagu ogaanayo waxa aad ka bixiso moobilkaaga biilka korontada saacadlaha cusub
Waxaan kuu soo qaadaneynaa 3 barnaamij oo loogu talagalay Android oo aad ku maamuli karto biilka korontada cusub ee mobilkaaga ku jira sidaasna markii aad keydin karto xoogaa yuuro ah
Sida loo dhagaysto raadiyaha Apple's Beats 1 raadiye on Android ah
Ka dhageyso idaacadda Beats 1 ee Apple Music qalabkaaga Android oo leh nooca 4.1 ama ka sareeya
Boomerang, oo ah dareen kordhin loo sameeyay Google Chrome oo noo saamaxaya inaan jadwal u dirno dirista emayllada Gmail
Maanta waxaan ku tusinayaa sida loo jadwaleeyo dirista emaylka ee Gmail mahadsanid kordhinta bilaashka ah ee xasaasiga ah ee Google Chrome.
Pushbullet wuxuu helaa Cusboonaysiin Weyn oo leh Wadahadal, Waxtarka Wareejinta Faylka ee Weyn, iyo Inbadan
Pushbullet waxay heshaa cusbooneysiin weyn oo ka kooban astaamo cusub sida sheekeysiga-madaxa ee Windows, hagaajinta isdhexgalka, sheekaysiga iyo waxyaabo kaloo badan.
Gawaarida kumbuyuutarka ee hadda ku jira taleefankaaga Android oo wata Qalabka +
Gelinta + waa aalad aad u wanaagsan oo loo soo raro tuuryo kumbuyuutareedka qalabkaaga Android oo markaa noqda mid wax soo saar badan leh.
[APK] Jair Music Player, mid ka mid ah kuwa ugu caansan qalabka muusikada muusikada waxaa lagu cusbooneysiiyay horumarin muhiim ah
Maanta waxaan kugula talineynaa Jair Music Player markale, taas oo aniga wali ah mid kamid ah ciyaartooyda muusikada bilaashka ah ee ugu fiican Android.
Truedialer si buuxda ayaa loogu cusbooneysiiyay qaabeynta cusbooneysiinta cusub
Nooca 3.0 wuxuu keensanayaa cusbooneysiinta Naqshadeynta Qalabka ee 'Truedialer', oo ah barnaamij lagu beddelayo wicitaanka nidaamka Android.
[APK] Sidee dib loogu bilaabi karaa qaabka Soo-kabashada sida ugu fudud
Maanta waxaan ku tusineynaa habka ugu fudud ee aad dib ugu bilaabi karto terminal-kaaga Android qaabka soo-kabashada iyo sidoo kale qaabab kale oo dib-u-bilaabid ah.
2 beddel oo loogu talagalay Google Play Store si loo soo dejiyo barnaamijyada Android
Maanta waxaan soo bandhigeynaa 2 beddel oo loogu talagalay Google Play Store si aan u soo dejino codsiyada boosteejadayada Android.
Soo ceshano ogeysiisyada ku yaal barta xaaladda ee ku taal "Android Lollipop" iyo Ticklr
Ticklr wuxuu dib u soo ceshan doonaa ogeysiisyada ku yaal barta barta qalabkaaga Android si uu xitaa u kiciyo Heads Up-ka oo aan qof walba jeclayn.
Shaashadda kala-baxa ayaa bilaaba inay gaaraan barnaamijyada Google
Shaashadaha soo dhaweynta ama 'Splash Screens' ayaa ka muuqda Khariidadaha Google iyo Youtube markii uu codsigu bilaabmo. Yaab Google.
[APK] Dhammaan codsiyada Asus Zenfone 2 (3): Maamulaha Faylka iyo Asus Email ee Asus Zenfone 2
Booska saddexaad iyo kan ugu dambeeya ee aan la wadaageyno dhammaan codsiyada Asus Zenfone 2 si loogu rakibo goob kasta oo Android ah.
[APK] Dhammaan codsiyada Asus Zenfone 2 (2): Saacadda, Xisaabiyaha, Jadwalka, Ogeysiiska Degdegga ah iyo Xusuusin Dheer ee Asus Zenfone 2
Halkan waxaan kaaga tagaynaa qaybtii labaad ee dhammaan codsiyada Asus Zenfone 2 si aad u awoodo inaad ku rakibto meel kasta oo ka mid ah qalabka Android.
[APK] Dhamaan barnaamijyada Asus Zenfone 2: Asus Zenfone 2 Music, Gallery iyo Sound Recorder app
Ma dooneysaa dhammaan codsiyada Asus Zenfone 2? Haddii ay sidaas tahay, ma seegi kartid qoraalkan halka aan ku wadaagno muusigga, gallery iyo codsi duubista codka ee Asus Zenfone 2.
Barnaamijyada Cajiibka ah ee Android: Maanta, Nadiifiyuhu wuu kordhay & Nadiifi
Maanta waxaan soo bandhigeynaa Nadiifiyaha Boost & Nadiifinta, codsi ama qalab dayactir loogu talagalay barnaamijyadayada 'Androids' kaas oo muhiim u noqon doona bartaada.
[APK] Sida loo rakibo barnaamijka 'Asus Zenfone 2 Launcher' ee Android 4.3+ kasta
Maanta waxaan sharxeynaa sida loogu rogo Android-kaaga Asus Zenfone 2 adoo soo degsanaya oo rakibinaya Launcher-ka Asus Zenfone 2 ZenUI Launcher.
Hadda waxaad ka akhrisan kartaa Androidsis gudaha News Republic, codsiga ugu fiican ee loogu talagalay Android
Maanta waxaan kugula talineynaa waxa aniga aniga ii ah codsiga wararka ugu fiican ee loogu talagalay Android.
Gundhigga eeyaha u yimaada Android: Tindog
Maaha in eeygaagu uu shukaansanayo laakiin Tindog waxaad ku baran kartaa eeyaha kale ee jecel aaggaaga.
Google wuxuu bilaabayaa nooca xorta ah ee xayeysiiska lagu taageero ee Google Play Music
Google waxay ku siin doontaa Play Music bilaash idaacado laakiin xayeysiis ah si ay ula tartamaan Spotify iyo Apple Music markay yimaadaan deyrta.
Sida loo hubiyo haddii GPU-ga qalabkaagu uu hoos u dhacayo meertada
Laga soo bilaabo nidaamka Android lafteeda waxaan haynaa qalab xiiso leh oo lagu hubinayo xaaladda GPU-ga qalabka.
Waxaan horeyba uheysanay 3 guuleystayaasha abaalmarinta abaalmarinta xisaabaadka 3 Todoist Premium si loogu dabaaldego naqshadooda cusbooneysiinta ee Qalabka Naqshadeynta
Laga soo bilaabo Androidsis iyo iyada oo lala kaashanayo Todoist waxaan ku dhejineynaa xisaabaadka 3 ee caymiska si aad u tijaabin karto dhammaan wanaagga nooca cusub ee la yimaada Qalabka Naqshadeynta
Sida loo rakibo nidaamka furaha tilmaamaha Samsung Galaxy S6 ee Android kasta
Maanta waxaan ku tusineynaa sida loo rakibo loona habeeyo codsi kaa farxin doona habka furaha tilmaamaha ee Samsung Galaxy S6 ee Android kasta.
[APK] Nooca ugu dambeeya ee 3.0 ee DropBox leh Agab Nashqadeysan oo laga heli karo qof walba
Nooca la heli karo ee 3.0 ee DropBox leh dhammaan Qalabka Naqshadeynta taas oo macnaheedu yahay isbeddel weyn oo ku yimid isdhexgalka iyo naqshadeynta arjiga.
Sida loo dalbado tigidhada, tareenka iyo tigidhada basaska qiimaha ugu fiican ee laga helo Android-kaaga
Maanta waxaan kugula talineynaa GoEuro, codsi xasaasi ah oo loogu talagalay Android oo naga caawin doona inaan helno oo aan ballansanno tikidhada, tareenka iyo tikidhada baska qiimaha ugu fiican iyo ilbiriqsiyo gudahood.
Ka xakamee kombuyutarkaaga sariirta kumbuyuutarka Intel Remote Keyboard ee loogu talagalay Android
Kiiboodhka 'Intel Remote Keyboard' wuxuu bixiyaa suurtagalnimada kula macaamilka kombuyutarkaaga Android si aad u fiican. Barnaamij weyn oo ka socda Intel-ka weyn.
World Radio FM, idaacadaha adduunka oo dhan laga gaadho halka ay gaadho Android-kaaga
Maanta waxaan idiin soo bandhigayaa codsi shucuur leh oo khadka tooska ah oo idaacadda ah oo noo oggolaan doona inaan si toos ah uga dhegeysanno barnaamijyadeenna Android-ka idaacadaha adduunka oo dhan.
Maanta waxaan kugula talinayaa barnaamijka apk ee ugu wanaagsan Android si aad u daawato Koobka Mareykanka ee bilaashka ah.
Marka xigta waxaan kaaga tagi doonaa APK-ka Muusikada Netease ee Isbaanishka oo loo turjumay mahadnaqa bulshada Android ee asxaabta HTC Mania.
Ultimate Browser Project waa bog cusub oo aad u miisaan fudud oo web browser ah oo si joogto ah loo horumariyo isla markaana leh xulashooyin fiican oo lagu habeyn karo.
Sida loo sameeyo widget barnaamijyadi udambeeyay ee Android Lollipop
MRU Widget waa barnaamij weyn oo aad kuheli karto widget barnaamijyadi udambeeyay ee lagahelay desktop-ka. Wixii Lollipop Android 5.0 ama ka sareeya.
[APK] Netease Music, the Chinese Spotify oo noo oggolaaneysa inaan ugu dambeyn soo dejisanno albamyada fannaaniinta aan ugu jecel nahay Ingiriiska
Muusikada Netease waa Spotify-ka Shiinaha, gebi ahaanba bilaash ah oo leh fursado badan marka loo eego Spotify Premium.
Quickpic wali waxay la taagan tahay laba astaamood oo cusub: raadi oo xoq si aad u xulato sawirro badan
Nooca cusub ee Quickpic wuxuu ku darayaa raadinta iyo mari xulashooyin badan oo sawirro ah. Tan dambe ee ku jirta Sawirada Google.
Google waxay keentaa barnaamijka Saacadda ee Play Store iyadoo la adeegsanayo Qalabka Naqshadeynta
Barnaamijka Nidaamka Nidaamka Nidaamka ee 'Android System Clock' wuxuu yimaadaa Play Store oo leh lahjadda Qalabka Naqshadeynta. Waqtiga ugu habboon ee cusbooneysiinta barnaamijka.
Internet ammaan ah oo aan la kormeerin mahadnaqid gantaal VPN - Xorriyadda Internetka
Maanta waxaan kugula talinayaa codsi loogu talagalay Android si aad awood ugu hesho internet ammaan ah oo aan kormeer lahayn
La wadaag sawirada BitTorrent Shoot inta udhaxeysa aaladaha kala duwan adigoon ku dhex badbaadin daruuraha
BitTorrent Shoot wuxuu ku dhashay iyada oo ujeedadu tahay in la siiyo isticmaale awood u leh inuu la wadaago sawirada inta udhaxeysa barnaamijyada kala duwan.
Facebook Lite ayaa ugu dambayntii soo degay Spain si uu kuugu badbaadiyo xoogaa megabytes ah oo ku saabsan qorshahaaga xogta
Facebook Lite ayaa ugu dambayntii ka degay Spain si ay dadka isticmaala u helaan Facebook aad u habeysan oo cuna xog yar.
CloudPlayer ayaa muusikadaada ka shubaysa DropBox, OneDrive iyo Google Drive
CloudPlayer waa soo jeedin aad u xiiso badan oo looga sii daayo muusikadaada Dropbox, OneDrive iyo Google Drive
Si fudud faylalka kombiyuutarkaaga ugu dir mobilkaaga oo leh Bogga 'Pushbullet Portal'
Portal wuxuu ku takhasusay wareejinta feylasha kombiyuutarka iyo moobiilka iyadoo xooga la saarayo sahlanaanta howsha.
Isku day Read Card Card Reader Bilaash oo astaamaheeda oo dhan si bilaash ah loogu shaqeysiiyey illaa Sebtember 1, 2015
Maanta waxaan ku siineynaa lambarka xayeysiinta ee Kaarka Ganacsiga Akhri Bilaash si aad isugu daydo dhammaan shaqooyinka codsiga ugu fiican ee bilaashka ah ee lagu maareeyo, loo abaabulo loona diro dhammaan kaararka ganacsiga.
Adobe wuxuu bilaabayaa afar barnaamij oo Creative Cloud ah oo ku saabsan Android
Maanta Creative Cloud 2015 waxaa lagu cusbooneysiiyay 4 barnaamij oo cusub oo Android ah: Color CC, Photoshop Mix, Shape CC iyo Brush CC.
Icondy, waa codsi kaa caawinaya inaad isku darto astaamaha ka kooban xirmooyinka kala duwan
Icondy wuxuu noo ogolaanayaa inaan isku darno xirmooyin kala geddisan oo qaab fudud ah si aan shakhsi uga dhigno taleefankeena Android.
APUS Browser, shabakad deg deg ah, fudud oo miisaan fudud
APUS Browser waa biraawsar shabakad oo u taagan culeyskiisa khafiifka ah, is dhexgalka nadiifka ah iyo deg deg deg deg ah ee degellada.
Line wuxuu bilaabayaa adeegiisa baahinta muusigga oo lacag lagu bixiyo Japan
Line Music waa sharad adeegga farriinta khadka tooska ah ee caanka ah ee maanta laga bilaabay Japan.
Sida loo tijaabiyo Firefox OS ee ku yaal terminal kasta oo Android ah
Maanta waxaan sharrax ka bixinayaa sida loo tijaabiyo Firefox OS mid kasta oo ka mid ah terminal-ka Android iyadoo la rakibo fudud apk fudud.
Sloth Launcher, dhig bar ay kujiraan barnaamijyada aad ugu jeceshahay hadba meesha, shabakada Wi-Fi iyo inbadan
Mashruuca 'Sloth Launcher' waa barnaamij aad ufiican oo aad kuheli karto barxada xaalada barnaamijyada aad isticmaasho iyadoo loo eegayo goobta, shabakada Wi-Fi ama xaalado kale.
Ku bilow, mid ka mid ah bedelka ugu fiican ee shaashaddaada "Android Lock Screen"
Maanta waxaan soo bandhigeynaa Start, oo ah bedel xasaasi ah oo ku saabsan Shaashadda Qufulka ee terminal-kaaga Android kaas oo aad kula fal-geli karto hab gebi ahaanba ka duwan.
[APK] Gaari cusub iyo ikhtiyaar lagu kireysto gawaarida Khariidadaha Google 9.10
Khariidadaha Google 9.10 waxay keeneysaa sheeko cusub oo xiiso leh sida awoodda ay u siiso adeegsadaha barnaamijka laftiisa inay sameyso booska gaariga
Sida loo demiyo wicitaanada codka WhatsApp
Maanta waxaan ku tusineynaa laba ikhtiyaar oo kala duwan oo ansax ah si loo joojiyo wicitaanada codka WhatsApp
Android M xal ma u noqon doonaa dhibaatooyinka is-maamulka?
Cusbooneysiinta cusub ee Android M waxay noqon kartaa xalka dhibaatooyinka is-maamul ee ay moodooyinka qaarkood muujinayaan. Maanta waxaan kuu sheegeynaa waxa aan ognahay.
Barnaamijyada cajiibka ah ee Android: Maanta, Faylasha Fayras
Maanta waxaan soo bandhigeynaa File Explorer, baare faylka Android-ka ah oo leh astaamo badan iyo is-dhexgal user-saaxiibtinimo oo si fudud loo isticmaali karo.
Flynx, oo ah biraawsar shabakadeed oo raacaya qaddarinta Link Bubble
Flynx waa biraawsar internet ah oo raaca qormooyinka 'Link Bubble' ee hawlo badan laakiin leh xulashooyin kale oo yar.
Wax walba oo ay Android Wear 5.1.1 na siiso.
Maanta, anigoo ka faa'iideysanaya cusbooneysiinta LG G Watch to Android Wear 5.1.1, waxaan kuu soo bandhigayaa fiidiyoow aan ku tusayo dhammaan wararka ku saabsan noocaan cusub ee Android Wear
Sida loo soo degsado fiidiyowyada YouTube-ka taleefankaaga Android
Waxaan ku tusineynaa sida loo soo dejisto fiidiyowyada YouTube-ka ee Android-ka loogu talagalay dib-u-soo-kabashada offline ama offline
Sida loo joojiyo madax wada sheekaysiga ama xumbada sheekaysiga ee Facebook Messenger
Facebook Messenger waxay leedahay madax sheekeysi gaar ah ama goobooyin lagu sheekeysto si dhaqso ah looga jawaabo xiriir. Waxaan ku tusaynaa sida loo baabi'iyo.
YAVOY oo ka socda Movistar ayaa hadda ku jira codsi loogu talagalay Android
Maanta waxaan soo bandhigeynaa arjiga cusub ee YAVOY ee Movistar ee loogu talagalay Android halkaas oo aad ku xakamayn karto koontadaada YAVOY marka lagu daro inaad haysato laba bilood oo bilaash ah
Xagjirnimada xagjirka ah, ku dhiirashada darbiyada ugu halista badan kuwa cusub ee ka imanaya Studio-yada Halfbrick
'Radical Rappelling' waa waxa ku cusub Halfbrick ee taariikhahaan halkaas oo cayaaraha xad dhaafka ah loogu raaxeysan karo sida ugu macquulsan.
Meesha ugu fiican ee lagu daawan karo finalka Champions League 2015 waa aaladdaada Android
Maanta waxaan sharxeynaa laba ikhtiyaar oo aan ku arki karno finalka Champions League oo toos ah oo tayo leh kanaalkaaga Android.
Sida loo demiyo ogeysiisyada "Heads-Up" ee ku saabsan Android Lollipop iyada oo aan xidid laga dhigin
Waxaan ku tusineynaa sida loo joojiyo ogeysiisyada "Heads-Up" hab fudud oo kuu oggolaanaya inaad si buuxda u maamusho iyaga.
[APK] Sida loo rakibo Android Clock M Kit Kit iyo Lollipop
Maanta waxaan la wadaagnaa apk-ka saacadda Android M, waxaan ku tuseynaa dhammaan howlaheeda waxaanan kuu sharraxeynaa habka rakibidda fudud.
Ma waxaad iibsaneysaa terminal cusub oo Android ah?. Versus, isbarbardhigaha tiknoolajiyada
Maanta waxaan kugula talineynaa dalabka 'Versus application', isbarbardhigaha tiknoolajiyada oo kaa caawin doona inaad isbarbar dhigto qalab kasta oo terminal ama tiknoolaji ah.
Android M iyo faahfaahinta kale ee la tixgelinayo
Haddii laba maalmood ka hor aan ogaanay qaar ka mid ah faahfaahinta qarsoon ee Android M, maanta waa waqtigii in yar oo dheeraad ah sida maamulaha cusub ee RAM.
Barnaamijyo Cajiib ah oo Android ah: Maanta Fayl Khabiir, Faylka Faylka Furaha ah ee Kuli Leh
Khabiirka Faylka waa feyl fayl Root cusub oo leh naqshad Naqshad Maaddadeed oo khaas ah oo aan horeyba u tijaabin karno mahadnaqdeeda beta.
Wax cusub oo ka socda Line waa Popcorn Buzz, wicitaanada kooxeed ee ilaa 200 oo isticmaala markiiba
Khadka ayaa hada bilaabay Popcorn Buzz, oo ah codsi ujeedadiisa ugu weyni tahay wicitaanada codka kooxda oo ay la socdaan ilaa 200 oo isticmaaleyaal isla waqti isku mid ah.
Tilmaamaha dareenka guud si loo badbaadiyo nolosha batteriga ee Android
Maanta waxaan kuugu sharxayaa sida hadalka, qaar ka mid ah talooyinka caqliga saliimka ah ee noo oggolaan doona inaan ku keydinno batteriga Android iyadoo aan loo baahnayn codsiyo dhinac saddexaad ah.
Tifatiraha Filimka FXGuru, arjiga bilaashka ah si loo abuuro saameyn muuqaal oo muuqaal leh
Maanta waxaan ku tusineynaa codsi xasaasi ah oo loogu talagalay Android si loo abuuro saameyn muuqaal ah oo muuqaal leh.
Akhlaaqda wanaagsan ee Sawirada Google
Sawirrada Google waxay u siisaa adeegsadaha soo dejin aan xadidnayn dhammaan sawirradooda iyo fiidiyowyadooda gebi ahaanba bilaash, marka laga reebo taxane weyn oo muuqaalo ah
Imgur wuxuu helayaa cusbooneysiin weyn oo ku saabsan nooca 2.0 oo leh naqshad gebi ahaanba la cusbooneysiiyay
Waxaan ugu dambeyntii heysanaa barnaamijka Imgur oo runtii sare u qaadaya waayo-aragnimada isticmaale mid ka mid ah wejiga hore ee internetka hadda.
Dhammaan macluumaadka ku saabsan taxanaha telefishanka ugu fiican ee ku yaal farahaaga Android
Haddii aad tahay qof balwad leh ama raacsan taxanaha telefishanka ugu fiican, markaa barnaamijkan kama maqnaan karo terminal-kaaga Android.
Sida loo isticmaalo Google Now Launcher ee qaabka muuqaalka muuqaalka ee boosteejada aan la taageerin (fiidiyaha)
Maanta waxaan ku tusayaa #TrucoAndroid kaas oo noo oggolaan doona inaan ku isticmaalno Google Now Launcher qaabka muuqaalka muuqaalka ee boosteejooyinka aan is-waafaqsanayn
Afarta faahfaahin ee Android M
Android M waxay keeneysaa dhowr astaamood oo cusub sida hagaajinta waxqabadka iyo faahfaahin badan. Afar waa kuwa aan ku xusnay qoraalkan.
3 Siyaabood oo Degdeg ah oo Loogu Qoro Qoraallada Codka ah ee Android
3 siyaabood oo deg deg ah oo loogu abuuro xusuus-qorrada codka ee Android oo aad raacdo raadadka Wakiilka Cooper ee Twin Peaks si aynaan wax u ilaawin.
12,4% qalabka Android waxay leeyihiin nooc ka mid ah hurdiga
Sannad ka dib markii la soo bandhigay Android L la soo bandhigay, Lollipop waxaa laga helaa 12,4% aaladaha Android ee soo gala Play Store toddobaadki 1.
Sida loo sahlo daaqad badan oo ku taal Android M
Maanta waxaan sharxayaa sida loogu suurtageliyo daaqadda badan ee ku jirta Android M, shaqaynta qarsoon ee leh talooyinkan fudud ama talooyinka aan ku raaxeysan doonno ka hor hirgelintiisa ugu dambeysa.
Sida loo xidid Nexus on Android M
Maanta waxaan ku tusineynaa talaabo talaabo ah sida loo rujiyo Nexus on Android M, oo ansax u ah Nexus 5, Nexus 6 iyo Nexus 9.
6 ka mid ah barnaamijyada Microsoft ee ugu wanaagsan qalabkaaga Android
6 ka mid ah barnaamijyada Microsoft ee ugu wanaagsan ee laga heli karo Android taasna waxay ku tusaysaa sida aad u taqaano sida loo horumariyo barnaamijyada waaweyn
Dhibaatooyinka meelaha? Android M ayaa kuu oggolaan doonta inaad ku rakibto codsiyada usha USB-ga
Mid ka mid ah astaamaha cusub ee Android M wuxuu noqon doonaa awood u leh inuu ku rakibo barnaamijyada darbiyada adag ee dibadda.
Android M ayaa kuu oggolaan doonta inaad habeyso dejinta degdegga ah
Cusboonaysiin kale oo ay soo saarto Android M waxay noqon doontaa suurtagalnimada in la habeeyo goobaha deg degga ah, oo la tirtiro waxyaalahaas aynaan rabin
Google wuxuu hagaajiyaa dhibaatada xakamaynta mugga ee Android M
Android M wuxuu xaliyaa mid ka mid ah dhibaatooyinka waaweyn ee kan ka horeeyey iyadoo dib loo mideynayo xakamaynta mugga fudud oo wax ku ool ah
Android M wuxuu ku darayaa mawduuc mugdi ah si loo badbaadiyo batteriga
Mid ka mid ah soo jiidashada ugu weyn ee daabacaadii ugu dambeysay shirkii horumariyaha Google, Google I / O 2015,…
Android M wuxuu leeyahay qaab daaqad badan leh, in kastoo hadda la qariyo
Mid ka mid ah waxyaabaha cusub ee ugu muhiimsan ee Android M wuxuu noqon doonaa qaabka daaqadaha badan. Horeba waa loo heli karaa, laakiin hadda qaab qarsoodi ah.
Sida loo rakibo Android M Launcher-ka cusub ee Android-kaaga, oo ansax u ah Lollipop iyo Kit Kat
Maanta waxaan ku tusayaa adiga talaabo talaabo ah sida loo rakibo barnaamijka cusub ee loo yaqaan 'Android M Launcher' si aad ugu raaxeysato wax badan ka hor qof kasta.
Sida loo daawado finalka Koobka Boqorka ee u dhexeeya Athletic Bilbao iyo FC Barcelona oo bilaash ku nool
Maanta waxaan sharxeynaa habka ugu wanaagsan ee lagu arki karo finalka Koobka Boqorka ee u dhexeeya Athletic Bilbao iyo FC Barcelona iyadoo laga soo gelayo galkaaga Android, horeyba tayo aan caadi aheyn.
Google Smart Lock ayaa maamuli doona furahaaga sirta ah si aad ugu gasho labada Chrome iyo Android
Google Smart Lock ayaa kuu gali doona barnaamij dhinac saddexaad ah adigoon gelin lambarka sirta ah. Isaga ayaa mas'uul ka noqon doona maareynta dhammaantood.
Sida loo suurtogeliyo muuqaalka keydinta aan dhammaadka lahayn ee Sawirada Google talaabo talaabo
Maanta waxaan ku tusineynaa talaabo talaabo ah sida aad ugu suurta galin laheyd keydinta aan xadidneyn ee Sawirada Google oo leh qaabka cusub ee sawirada ilaa 16 mpx iyo fiidiyowyada 1080p.
Soo koobida wax walboo aan ku aragnay Google I / O 2015
Google I / O 2015 wuxuu lahaa maalin wanaagsan shalay iyadoo la soo bandhigayo dhammaan wararka Google ee sanadka iyada oo la adeegsanayo Android, Wear iyo inbadan
Hordhaca Android M ayaa hadda loo heli karaa Nexus 5, 6 iyo 9
Hordhaca Android M ayaa loo heli karaa qalabka Nexus 5, 6 iyo 9 oo maanta ka bilaabanaya sawir warshad ahaan.
Lixda fure ee Android M
Hordhaca Android M waxaa maanta soo bandhigay Sundar Pichai oo leh lix fure oo isu keenaya kuwa ugu muhiimsan noocyadan cusub.
Microsoft waxay si rasmi ah u daahfureysaa Lens Office-ka oo ku yaal Play Store
Xafiiska Lens ayaa hadda laga heli karaa iyada oo bilaash ah Dukaanka Play-ka si loo soo dejiyo. Barnaamij aad u fiican oo lagu baarayo dukumiintiyada
Abka socodka Periscope ee hadda laga heli karo Android
Codsiga tooska loogu sii daayo Periscope ayaa hadda laga heli karaa Android si loola tartamo Meerkat, oo ah barnaamij kale oo noociisa ah.
Microsoft waxay ku dhawaaqday Cortana for Android
Microsoft waxay ku dhawaaqeysaa Cortana oo loogu talagalay Android iyo iOS, waxayna imaan doontaa tii hore dhammaadka Juun. Kaaliyaha codka ee siiyay wax badan in laga hadlo.
Sida loo yeesho 2 akoon Twitter isla aalad
Maanta waxaan kuugu sharxeynaa barnaamijkaan aasaasiga ah ee fiidiyowga ee 'Android-tutorial' ah, sida loo helo 2 koonto oo Twitter ah oo ku yaal isla terminal-ka Android.
Ka qari dhammaan waxyaabahaaga gaarka ah indhaha dadka kale adoo adeegsanaya Andrognito 2
Andrognito 2 waa nooc cusub oo u taagan naqshadeynta Maaddadiisa iyo taxaddarro wanaag ah oo lagu kaydiyo faylashaada gaarka ah
Sida Loogu Kordhiyo Qoraallada Ku Xirran Shaashadda Qufulka ee 'Android Lollipop'
Pushbullet-ka waxaan ku heli karnaa barnaamijka ugufiican si deg deg ah loogu abuuro qoraalo si loogu qaado shaashadda qufulka ee 'Android Lollipop'
Sida loo kiciyo rukhsadda rukhsadaha CM12 iyo CM12.1 Android Lollipop Roms
Maanta waxaan sharxayaa sida loo suurtageliyo rukhsadaha rukhsadda ee CM12, CM12.1 iyo ROM-yada laga soo dheegtay.
Doorashooyinka 2015: Adigu miyaanad go'aan gaadhin? Weli waxaad haysataa wakhti aad ku go'aansato doorashooyinka Imtixaanka 2015
Maanta waxaan soo bandhigeynaa codsi cajiib ah oo loogu talagalay Android, Doorashooyinka Tijaabada 2015, oo aad ku sameyn karto imtixaan dhameystiran oo aad ku baran karto barnaamijka doorashada ee ku dhowaad dhammaan xulashooyinka siyaasadeed ee Spain.
Sidee loogala socdaa natiijooyinka doorashadii heer gobol iyo degmo ee sanadkii 2015 qalabkaaga gacanta. (Android, iPhone iyo Windows Mobile)
Maanta waxaan ku tusineynaa habka ugu wanaagsan ee lagu ogaan karo natiijooyinka doorashadii gobollada iyo degmooyinka ee 2015 lagu qabtay Spain.
Dhibaatooyinka dib-u-dejinta warshadda: xogta ayaa weli ku jirta qalabka Android
Dib-u-dejinta Warshadu waxay kuu oggolaaneysaa inaad tirtirto xogta kuna soo celiso sidii ay uga timid warshaddii. Laakiin daraasad ayaa muujisay in Android tirtirka uusan ahayn wadar.
[APK] OneClip, baddalka Microsoft ee Pushbullet si uu u nuqul ka sameeyo una dhajiyo inta u dhexeysa aaladaha kala duwan
OneClip waa adeeg cusub oo loogu talagalay iswaafajinta iskuulada udhaxeeya aaladaha kala duwan, ha noqoto macruufka, Android, Windows Phone ama Windows PC
Hexy Launcher, oo ah barnaamij bilow ah oo ku saleysan laba-geesoodle ah oo ay abuureen Swiftkey
Swiftkey wuxuu nooga yimaadaa inaan la yaabno Hexy Launcher, oo ah barnaamij cusub oo soo roga oo ka dhigaya miiskaaga muraayad dusha sare leh barnaamijyo.
Codsiyada cajiibka ah ee loogu talagalay Android: Maanta LPIN PLAYER, oo ah muusig muusig iyo dareen muusig kala duwan oo loogu talagalay Android
Maanta qeybta codsiyada cajiibka ah ee loogu talagalay Android waxaan ku soo bandhigeynaa muusig muusig ku habboon dadka nostalgic.
Sida loogu khamaarayo lacag la'aan Android si aad ugu guuleysato hadiyado waaweyn
Maanta waxaan kugula talineynaa codsi bilaash ah oo bilaash ah oo loogu talagalay Android kaas oo noo oggolaan doona inaan ku guuleysano hadiyado cajiib ah adoo ku sharraxaya lacag la'aan dhacdooyinka cayaaraha.
Buugaag bilaash ah oo ku yaal farahaaga Android oo leh Wattpad
Wattpad wuxuu na siiyaa kumanaan buugaag bilaash ah oo qaab elektaroonik ah si aan uga raaxeysto terminaalkeena Android iyo sidoo kale suurtagalnimada inaan u soo dirno hal-abuurkeenna si aan ula wadaagno adduunka oo dhan.
Swipes, waa barnaamij cusub oo aad ku liis garayn karto waxyaabaha aad qaban karto oo aadan ka maqnaan karin
Duufaannada ayaa imanaya si ay u noqdaan barnaamijka aad ugu jeceshahay inaad wax ku qorto oo aad hawlo ku qabato. Waxaa xusid mudan naqshadeeda weyn iyo fudeydkeeda howlaha
Kalandarka qorrax ka soo baxa wuxuu ku darayaa taageerada Wunderlist, mid ka mid ah barnaamijyada ugu wanaagsan ee lagu dhammaystiro howlaha
Wunderlist waa barnaamij lagu qoro oo lagu fuliyo howlo maanta laga bilaabo ay leedahay kalandarka Qorrax dhaca
[APK] Abka Instagram-ka ee koolajyada waa halkan: Qaabeynta
Layout, oo ah barnaamijka 'Instagram' ee loogu talagalay abuurista koolajyada, ayaa hadda laga heli karaa Play Store ka dib markii uu yimid macruufka bishii Maarso.
[APK] Sida loo rakibo 'Xposed on Lollipop'
Maanta waxaan kuu sharxayaa adiga oo kaashanaya fiidiyoow kuna lifaaqaya dhammaan faylasha lagama maarmaanka u ah geeddi-socodka, sida loo rakibo Xposed on Lollipop.
Android Wear wuxuu awoodi doonaa inuu ka jawaabo wicitaanada dhawaan
Soosaarayaasha Android Wear waxay la shaqeynayaan dharka xiran ee ku daraya kuwa ku hadla iyo sidoo kale nooc OS ah si looga jawaabo wicitaanada.
Sida loo isticmaalo taleefankaaga Android si badbaado leh marka aad aadeyso wadada
Iris ayaa kuu oggolaan doonta inaad ka dhex aragto shaashadda marka kamaraddu ay shaqeyneyso. Codsi yaab leh
[APK] Sida loo xidido Android-kaaga si fudud xitaa noocyada loo yaqaan "Lollipop"
Maanta waxaan ku tusineynaa codsi rasmi ah si aad u hesho Root-kaaga Android oo ay ku jiraan noocyada nacnaca.
Zen Launcher, oo ah bilawga barnaamijka ugu yar ee aan gaarin miisaanka weyn
1MB waa miisaanka loo yaqaan 'Zen Launcher', oo ah barnaamij bilaaw ah oo wax yar oo wax u beddela oo dhab u noqon kara kuwa kale ee caanka ah
Android waxay leedahay kaliya 26% saamiga suuqa mobilada ganacsiga
In kasta oo soo dhaweynta Android oo ah nidaam hawlgal ka mid ah dadka isticmaala gaarka loo leeyahay ay aad u wanaagsaneyd, haddana shirkadaha weli 26% ayey sii ahaanayaan
Sida loo soo rogo feylasha durdurka ee ka yimaada Android, xitaa shabakadaha xaddidan
Maanta waxaan ku tusineynaa isticmaalka uTorrent si aad u raadiso oo u soo degsato faylasha durdurka ee Android.
Notifidgets, barnaamijka ku darsanaya widget-yada shaashadda qufulka ee 'Android Lollipop'
Lollipop-ka Android ayaa meesha ka saaray raad kasta oo qalabka widget-yada ah. Mar labaad kula soo noqo barnaamijkan loo yaqaan 'Notifidges'
Sidee looga galaa Pirate Bay Spain iyo xaddidaadaha juqraafiyeed
Maanta waxaan ku tusineynaa qaab aad u fudud oo aad ku dhaafi karto xaddidaadda gobolka ee Burcad-badeedda oo aad ugu raaxeysan karto websaydhka soo dejinta webiga xitaa Spain.
Ku xir barnaamijyadaada erey sir ah ama furid qaab leh Hexlock
Hexlock waa codsi xiiso leh oo ku saabsan asturnaanta iyo amniga barnaamijyadaada oo kuu oggolaanaya inaad dhaqaajiso illaa lix muuqaal
Bluboo X550, oo ah terminal leh batari dhan 5.300mAh
Bluboo X550 waa mid ka mid ah aaladaha ugu horeeya ee yeelan doona batari weyn, gaar ahaan wuxuu noqon doonaa 5.300 mAh.
Finalka horyaalnimada BBVA waxaa lagu ciyaarayaa Android-kaaga: Atlético de Madrid - FC Barcelona iyo Spanish - Real Madrid
Maanta waxaan ku tusineynaa sida ugu wanaagsan ee aad ku daawan karto Atlético de Madrid - FC Barcelona iyo Isbaanishka - Real Madrid oo lacag la’aan ka ah Android-kaaga ama TV-gaaga ku xiran Chromecast.
4 barnaamij oo lagu baarayo dukumiintiyada aan ka maqnaan karin taleefankaaga Android
Ka baarista dukumiintiyada taleefankaaga Android hubaal way ka fudud tahay mid ka mid ah 4-ta barnaamij
Microsoft waxay soo bandhigeysaa Hyperlapse on Android, oo ah barnaamij lagu qabanayo waqti-dhaafid tayo sare leh
Microsoft waxay soo saareysaa barnaamij kale oo tayo sare leh Hyperlapse, oo ah barnaamij soo jiray sanado badan isla markaana waqti ka luminaya taleefankaaga.
[APK] WhatsApp 2.12.87 iyo tillaabadiisii ​​ugu dambaysay oo si buuxda u Noqotay Naqshad
WhatsApp qaabka cusub wuxuu tirtirayaa raadadkii ugu dambeeyay ee Holo Design si uu si buuxda ugu aado Qalabka Naqshadeynta Nalalka Android
Sida loo Unroot Android Si fudud
Maanta waxaan ku tusineynaa habka ugu fudud ee Unroot Android.
Nova Launcher 4.0 ayaa hadda laga heli karaa Play Store iyadoo wadarta cusboonaysiinta Qalabka Naqshadeynta
Nooca ugu dambeeya ee xasilloon ee Nova Launcher 4.0 ayaa ugu dambeyntii lagu heli karaa dhammaan dhadhanka Naqshadeynta Maaddada ee aad ugu jeceshahay qaabka muuqaalka
Sida loo khawano Trivia Crack
Maqaalka maanta waxaan uga hadlaynaa sida loo khawano la weyddiiyo ama sida loo khiyaameeyo ciyaartan caanka ah ee la aqoonsan yahay ee Android.
[APK] Google Fit wuxuu helaa mitirka masaafada, kalori miiska, widget iyo in ka badan
Google Fit wuxuu ku yimaadaa nooc cusub oo leh widget, kalori miiska, mitirka masaafada iyo wejiga saacadda ee loogu talagalay Android Wear
Sida loo rogo Android-kaaga Samsung Galaxy S6
Maanta waxaan ku tusineynaa afar codsi oo bilaash ah, sida loogu rogo Android-kaaga Samsung Galaxy S6
Hurdo, barnaamijka fariimaha gaarka loo leeyahay ee BitTorrent ayaa ka taga kanaalka alfa wuxuuna la yimaadaa war
Hurdadu waxay ka tagtaa kanaalka alfa waxaana loo soo bandhigaa inay tahay mid ka mid ah waxyaabaha ugu wanaagsan ee loogu talagalay farriinta khaaska ah iyadoo loo marayo borotokoolka 'BitTorrent'
Real Madrid - Juventus waa nool tahay waana lacag la’aan
Maanta waxaan kugula talinayaa codsi bilaash ah oo dareen leh oo noo oggolaan doona inaan aragno Real Madrid - Juventus oo nool oo bilaash ah, iyo sidoo kale taxanaha tv-yada, filimada iyo dhammaan cayaaraha adduunka.
Sida loola wadaago internetka mobilkaaga
Maqaalka maanta waxaan uga hadlaynaa sida ugu fudud ee internetka looga wadaagi karo mobilkaaga qaab fudud oo markaa aad ugu xirmi karto aaladaha kale.
Abuur qoraallo dheg dheg ah si aad uga heshid baarka ogeysiiska oo ay la socoto Xusuusin Ogeysiis ah
Xusuusin Ogeysiin ah waxaad ku abuuri kartaa qoraal deg deg ah si aad ugu dhejiso qaab joogto ah baarka ogeysiiska
Dhammaan macluumaadka ku jira taleefankaaga xilligan la jooga Castro
Castro waa barnaamij cusub oo mas'uul ka ah inuu ku wargeliyo isticmaalaha dhammaan astaamaha iyo macluumaadka guud ee taleefannadooda Android ama kiniiniga ah
Hadda waad iska qori kartaa barnaamijyada soo socda ee Google Play
Markaad iska diiwaangeliso barnaamijyada ku jira Google Play, waxaad heli doontaa ogeysiin maalinta la bilaabayo barnaamijka ama ciyaarta fiidiyowga
Waa inuu lahaadaa barnaamijyo xagaaga
Halkan waxaad ku haysaa codsiyo taxane ah oo muhiim u ah xagaaga soo socda.
Sida looga helo e-maylkeyga aragtida ah 'Android'
Haddii aad leedahay akoon e-mayl oo Muuqaal ah oo aad rabto inaad ka hesho Android, waxaan kuu sharxi doonaa tallaabo tallaabo ah sida loo qaabeeyo.
Sida loogu isticmaalo sawirada Facebook xiriirada aan ku leeyahay Android
Haddii aad jeclaan laheyd xiriiradaada ajandaha inay yeeshaan sawir ay ku jiraan sawiradooda Facebook, maanta waxaan kuu sheegi doonaa sida loo sameeyo Android.
Sida loo xannibo xayeysiinta dalabka ee ku saabsan Android
Xayeysiintu mararka qaar wey ka careysiisaa isticmaalaha, sidaa darteed waxaan ku bari doonaa sida loo joojiyo xayeysiinta ciyaaraha iyo barnaamijyada Android.
Barnaamijyada Cajiibka ah ee Android: Maanta Viral Pop-up, Ayaa kuugu Fiican Ciyaaryahan Tube
Maanta waxaan kuu soo bandhigeynaa Viral Pop-up, oo aniga ah kan kuugu fiican ee kuu Ciyaara Tube, sidaa awgeedna lagu soo daro buugga codsiyada cajiibka ah ee loogu talagalay Android.
Elephone P4000 ayaa berri la soo bandhigi doonaa iyada oo la adeegsan doono batari dhan 4.800 Mah
Elephone waa mid ka mid ah soosaarayaasha Shiinaha ee sii deynaya aaladaha leh astaamo aad u wanaagsan qiimo jaban. Elephone P4000 ayaa la soo bandhigi doonaa berri.
Sida loo soo diro faylasha mp3 ka WhatsApp
Codsiyada isticmaalaha maanta waxaan ku tusineynaa sida looga diro WhatsApp faylasha WhatsApp.
Google waxay rajeyneysaa xakameynta barnaamijyada iyada oo loo marayo 'Voice Access' ee barnaamijka I / O
Barnaamijyada Google I / O waxaa jira hadal ku saabsan "Helitaanka Codka" si loo siiyo xakameyn dheeraad ah isticmaaleyaasha iyo horumariyeyaasha inay adeegsadaan barnaamijyadooda
Sida loo isticmaalo Launcher Lab, casharka 7aad: Isticmaalka lakabyada Dhamaadka !!
Waxaan u nimid casharkii ugu dambeeyay ee ku saabsan sida loo isticmaalo Launcher Lab si aad u sameysato Launcher-kaaga gaarka ah ee Android, kiiskan waxaan ugu talagalnay ikhtiyaarka waxtarka leh ee isticmaalka lakabyada.
Sida loo istcimaalo Launcher Lab, casharka 6aad: Abuuritaanka qalabka Widget-ka
Casharkan lixaad ee ku saabsan sida loo isticmaalo Launcher Lab, waxaan si toos ah ugu quuseynaa abuuritaanka habkeenna gaarka ah ee Music Widget.
Sida loo isticmaalo Launcher Lab, casharka 5aad: Sida loo abuuro widget saadaasha hawada
Halkan waxaad ku leedahay casharkii shanaad oo ku saabsan sida loo isticmaalo Launcher Lab si loo abuuro Launcher-keena Android, kiiskan annaga oo ah widget-ka saadaasha hawada.
[APK] Sida loo daawado Barcelona Bayern Munich bilaash
Maanta waxaan idinla wadaageynaa codsi qaab jibbaar ah oo noo ogolaanaya inaan daawano Barcelona Bayern Munich bilaash.
Sida loo istcimaalo Launcher Lab, Casharka 4aad: Abuurista Saacado Gaar ah iyo Taariikh Widget
Casharkaan afaraad ee ku saabsan sida loo isticmaalo Launcher Lab waxaan ku baraynaa wax walboo aad ubaahantahay si aad u sameysato saacad iyo taariikh widget ah.
Sida loo isticmaalo Launcher Lab, Casharka 3-aad: Adeegsiga qaababka iyo sawirada iyo Abuuritaanka Astaamaha Halbeega Batariga
Casharkan seddexaad ee ku saabsan isticmaalka Launcher Lab waxaan ku tusineynaa sida loo isticmaalo qaababka iyo tirooyinka sidoo kalena loo abuuro qalab batrool noo gaar ah.
Android Lollipop ayaa hadda noo oggolaaneysa inaan keydinno oo aan soo celinno barnaamijyadeenna
Google waxay noo fududeyneysaa nooca cusub ee loo yaqaan "Android Lollipop", wuxuu noo ogolaanayaa inaan ku istcimaalo barnaamijyada isla markaana aan awoodno inaan keydinno xogta kuwan
Quudin ku cusbooneysii is-dhexgalka Google Now
Nooca cusub ee Feedly wuxuu bixiyaa is dhexgalka Google Now si kaararka ay u muuqdaan kuwa muujinaya RSS ugu habboon
Sida loo isticmaalo Launcher Lab, casharka 2aad: Ku darida qoraalka
Casharkaan labaad ee casharka ku saabsan sida loo isticmaalo Launcher Lab waxaan ku tusineynaa ikhtiyaarka lagu daro qoraalka.
Sida looga fogaado khidmadaha wareegga xogta
Haddii aad u safrayso dibadda oo aad rabto inaad iska ilaaliso in lagugu soo dalaco biilashaada si aad u dhex mushaaxdo xogta, fiiro gaar ah u yeelo talooyinkan.
Sida Loogu Cayaaro Fiidiyowyada Taariikhda VLC
VLC waxay u oggolaaneysaa nooca cusub inuu ku ciyaaro fiidiyowyo gadaal ah markii arjiga la baxo ama shaashadda la demiyo
Sida loo isticmaalo Launcher Lab, casharka 1: diyaarinta bay'ada shaqada iyo abuurista astaamaha ugu horreeya
Casharkan koowaad ee ku saabsan sida loo isticmaalo Launcher Lab, waxaan ku baraynaa inaad diyaarsato bay'ada shaqada iyo sidoo kale xulashada gidaarka iyo sameynta astaamaha ugu horreeya ee caadada ah
Barnaamijyada Cajiibka ah ee Android: Maanta, Launcher Lab si aad uga abuurto Launcher adiga kuu gaar ah oo aad xoqdo
Maanta waxaan kugula talineynaa Launcher Lab si aad u abuurto adiga kuu gaar ah Android Launcher laga bilaabo xoqida iyo maareynta dhamaan dhinacyada.
AppChat, oo ah qolka lagu sheekeysto barnaamij kasta oo aad rakibtay
La xiriir kumanaan isticmaale oo isticmaala barnaamijyo isku mid ah sida aad u isticmaasho AppChat, oo ah barnaamij cusub oo la yaab leh oo ku saabsan Android
Barnaamijyada dhinac saddexaad waxay ku yimaadaan Google Now iyaga oo wata 'Ok Google'
Google wuxuu bilaabaa tijaabinta amarrada codka ee barnaamijyada-saddexaad ee Google Now. Sidan ayaad ku isticmaali kartaa 'Ok Google, Shazam heestaan'
[Soo Degso APK] Telegram 2.8 waxay la timid ogeysiisyo xariif ah, xiriiriyeyaal ku biiraya kooxaha iyo waxyaabo kaloo badan
Nooca Telegram-ka 2.8 wuxuu halkan ku yaal faahfaahin badan oo yaryar: ogeysiisyo caqli-gal ah, xiriiriyeyaal ku biirista kooxaha iyo waxyaabo kaloo badan
Sida looga beddelo hal telefoon taleefan kale
Haddii aad qorsheyneyso inaad ka beddesho hal taleefan oo taleefan kale, waxaan kuu sharraxeynaa waxyaabaha ay tahay inaad ogaato si aadan ugu haysan wax xog ah oo lumay bartamaha wadada.
Sawirada warshadaha Android 5.1.1 ayaa loo heli karaa Nexus 7 WiFi 2012/2013 iyo Nexus 10
Nooca Android 5.1.1 ayaa hadda loo heli karaa Nexus 7 Wifi 2012/2013 iyo Nexus 10. Cusboonaysiin cusub oo hagaajisa cilladaha iyo hagaajinta waxqabadka
[Ku soo dejiso APK] Wax ku cusub Messenger waa jawaabo deg deg ah iyo aalad wadahadal
Google Messenger waxaa lagu cusbooneysiiyay nooc cusub oo keenaya laba astaamood oo cusub oo xiiso leh: jawaabaha degdegga ah iyo aaladda wadahadalka
Evernote wuxuu bilaabayaa Evernote Plus oo leh 1GB duubis, marin u helida qoraalada qad la'aanta iyo qufulka ereyga
Evernote Plus waxay bixisaa 1GB oo upload ah bishii, marin u helida qoraalada qad la'aanta, qufulka ereyga, iyo emaylka
Helpin, shabakada cusub ee bulshada ee wada shaqeynta
Helpin waa shabakad bulsheed cusub oo u heellan isticmaalka wadajirka ah ee isticmaalayaasha.
[APK] Sida loo duubo shaashadda Android xitaa iyadoo cod la adeegsanayo
Maanta waxaan kugula talineynaa codsi xasaasi ah oo lagu duubo shaashadda Android oo aan kala soo bixi karno Play Store ama si toos ah u soo dejinta apk.
Microsoft waxay diyaar u tahay inay ku dhawaaqdo taageerada barnaamijyada Android ee Windows 10
Haddii aad haysatid kumbuyuutar Windows 10 waxaad lahaan lahayd dhammaan barnaamijyada Android haddii warka ay Microsoft bixin doonto toddobaadkan uu yahay mid dhab ah
Barnaamijyada Cajiibka ah ee Android: Maanta Wifi Sentinel
Maanta codsiyada cajiibka ah ee loogu talagalay Android waxaan kuugu soo bandhigeynaa Wifi Sentinel, oo ah qalab bilaash ah oo loogu talagalay Android kaas oo naga caawin doona inaan ku xirno ka-goynta Wifi si otomaatig ah oo caqli leh.
Google Now waxay kudareysaa kaararka 70 barnaamij oo cusub
Laga soo bilaabo Google Hadda waxaad ka arki kartaa liiska-ciyaarista ee Spotify ku talinayso ama qaar ka mid ah wararka ka imanaya Circa